मध्यपश्चिम | Bardiya Online
नेपालगन्ज, बाँके। संघीय समाजवादी फोरम नेपालले बाँकेले बिरामीहरुलाई फलफूल वितरण गरेर नेपालगन्ज नगरक्षेत्रमा आफ्नो चुनावी घरदैलो तथा मतदाता भेटघाटको अभियान सुरु गरेको छ । क्षेत्र नं. २का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार मोहम्मद इस्तियाक राईले भेरी अञ्चल अस्पतालमा रहेका बिरामीहरुलाई फलफूल वितरण गरेर घरदैलो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हुन् । अस्पतालमा रहेका एक सय ५० जना बिरामीलाई [पूरा पढ्नुहोस्]
नेपालगन्ज, बाँके। सडक वारपार गर्न बनाईएको जेब्राक्रसिङले यात्रुलाई सास्ती भएको छ भन्दा सामान्यत विश्वास नलाग्न सक्छ । तर यस्तै पिडाबाट गुज्रिएका छन नेपालगन्जबासी । बाटो हिंड्ने जो कोहिलाई सहज होस भनेर नेपालगन्जको चार लेन सडकमा बनाईएको जेब्रा क्रसिङ पार गर्ने ठाउँँमा नै बार भईदिएपछी पैदल यात्रुलाई झन सास्ती भएको हो । “जेब्राक्रसिङ छ, सडक पेटीसम्म जाने खुल्ला बाटो छैन, [पूरा पढ्नुहोस्]
भुमे, रुकुम पुर्व। एकै पटक हेर्न, सुन्न र पढ्न मिल्ने डिजिटल नागरिक बडापत्र रुकुम पूर्वको एक गाउँपालिकाले प्रयोगमा ल्याएको छ । भूमे गाउँ कार्यपालिकाले सन्चालनमा ल्याएको डिजिटल प्रविधिको नागरिक बडापत्रको उद्घाटन गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरले एक कार्यक्रमका बिच रिमोट थिचेर गरेका हुन। यही कात्तिक २२ गते भूमे गाउँपालिका ३ सिमास्थित गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा [पूरा पढ्नुहोस्]
नेपालगन्ज,बाँके। नेपालगन्जका विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले विभिन्न प्रकारका विद्युतीय सामाग्री बनाएर प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले बनाएका सामाग्रीबारे जानकारी दिन बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । आफ्नो छोराछोरी विद्यालयमा पुग्यो कि पुगेन, सुतेरै बत्ती बन्द र खोल्न सकिने जस्ता विभिन्न प्रकारका विद्युतीय उपकरणहरु बनाएको विद्यार्थी विमलकुमार यादवले [पूरा पढ्नुहोस्]
नेपालगन्ज, बाँके। नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका वडा नं. ४ की जनप्रतिनिधी आफ्नै कार्यकर्ताद्वारा कुटिएकी छिन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाँकेबाट नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको वडा ४ वडा सदस्य एवं नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित ईन्दिरा शाही माथि हातपात भएको हो । मंगलबार राप्रपा पार्टी कार्यालयमा जिल्ला सदस्य विष्णु सिंह ठकुरीले उनी माथि हातपात [पूरा पढ्नुहोस्]
नेपालगन्ज, बाँके। नेपालगन्ज भन्सार नाकाबाट प्रहरीले पेस्तोल र गोली सहित एक युवालाई पक्राउ गरेको छ । ४५ थान गोली र एक थान यएरगन सहित बाँके प्रहरीले एक जनालाई नेपाल–भारत सीमा नाका जमुनाहबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । भारतको सिमलामा मजदुरी गरेर घर फर्कदै गरेका सल्यान थारमारे–७ का रमेश योगीको साथमा एक थान यएर गन र त्यसमा लाग्ने ४५ थान गोलीसहित बुधबार बिहान साढे छ [पूरा पढ्नुहोस्]
नेपालगञ्ज,बाके । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको नगर क्षेत्रको यातायात पार्किङ व्यवस्थित गरिने भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको अगुवाईमा आईतबार बसेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय वैठकले गरेको निर्णयानुसार नगर क्षेत्रको मुख्य सडक क्षेत्रमा पार्किङ स्थान छुट्याइने भएको हो । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको अध्यक्षतामा बसेको राजनीतिक दल, विषयगत कार्यालय प्रमुख, [पूरा पढ्नुहोस्]
कोहलपुर, बाँके। भारतीय खुसार्नीको एकाधिकार रहेको नेपालगन्ज र कोहलपुरमा अहिले प्रयाप्त रुपमा नेपालका पहाडी जिल्लाको खुसार्नी खपत हुन थालेको छ । खुसार्नीका लागि भारतीय उत्पादनमा भर पर्दै आएका खुद्रा तथा फुटकर तरकारी व्यापारीहरुले अहिले मध्य र सुदुरका पहाडी जिल्लाबाट खुसार्नी ल्याउने गरेका हुन । कोहलपुर र नेपालगन्जमा अहिले बैतडी, सुर्खेत, सल्यान, रोल्पा, दैलेखबाट खुसार्नी [पूरा पढ्नुहोस्]
बाँके। बाँकेको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मलेरियाको संक्रमण देखिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हाल सम्म ३२ जनामा मलेरियाको संक्रमण देखिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मलेरिया सार्ने लामखुट्टे बढेपछि उक्त क्षेत्रमा मलेरियाको संक्रमण देखिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका भेक्टर कन्ट्रोल सहायक रत्नलाल शर्माले जानकारी [पूरा पढ्नुहोस्]
कोहलपुर,बाके। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा लिएको भेरी–बबई डाईभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजनामा पाँच सय नेपाली युवाले रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूले आयोजनाको सुरुङ पाईपका उद्योग र सुरुङ निर्माण लगायतमा काम गरिरहेका छन् । आयोजनाका अनुसार नेपाली कामदारले मासिक १६ हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँदै आएका छन् । सुर्खेत, बााके, बर्दिया, जाजरकोट, सल्यान लगायतका युवाहरु आयोजनामा काम [पूरा पढ्नुहोस्]